Archive du 15-oct-2021
Mivarotra saka be loha
Lasa resaky ny moana sy ny marenina ny toe-draharaha miseho eto amin’izao fotoana izao fotoana izao. Na mikorontana ambony ambany aza ny zava-misy,
Entona fandrehitra - Vitogaz Tsy maintsy midina io amin’ny alatsinainy, hoy ny minisitra
"Tsy maintsy midina ny vidin'ny vitogaz, amin'ny alatsinainy 18 oktobra", hoy ny Minisitry ny Fampiroboroboana ny Indostria sy ny Varotra ary ny Fanjifana
Mponin’Andoharanofotsy Mangataka mpitandro ny filaminana isaky ny tobim-piantsonana
Mbola tsy tonga any amin’iny faritra Atsimondrano iny ireo mpitandro ny filaminana apetraka mba hiambina ny mpandeha isan-kariva iadiana amin’ireo mpangarom-paosy sy mpanao sinto-mahery
PM Ntsay Christian “Tsy misy terena hamoaka vola amin’ny grevy eto”
Tsy terena hamoaka vola amin’ny alalan’ny grevy ny fanjakana Praiminisitra eo anatrehan’ny fitakiana maro mandeha. Nambarany, fa misy fitakiana mitombina,
Brice Randrianasolo “Efa tanteraka talohan’ny naha minisitra ny 60%n’ny praograma”
Araka ny nahafantatra rehetra ny tantaran’i Brice Randrianasolo, hoy ity minisitry ny harena an-kibon’ny tany teo aloha ity,
Herintaona sy tapany aty aoriana Miverina ny fampanantenana solosaina isam-pokontany
Nanomboka omaly teny Ambatobe sy fokontany vitsivitsy teto Antananarivo ny fitsinjarana ireo karinem-pokontany vaovao. Ireto farany dia efa misy famantarana manokana na "QR code",
Mpivarotra asa tanana -Ambohitrimanjaka Nikatona noho ny Covid 19 ny 90%
Ny 90%-n'ireo mpivarotra sy mpanao asa tanana eny amin'ireo trano eva eny Ambohitrimanjaka no nikatona noho ny valanaretina Covid 19, raha ny fampahafantarana voaray. Misedra olana maro izy ireo.
Rodoben’ny mpanohitra “Mpitondra fanjakana no ilainay miady hevitra aminay”
Nandefa taratasy aty aminay ny tale jeneralin’ny ORTM, Belalahy Jean Yves Evariste, hoy ny Rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara tetsy Bel’air omaly,
Feno 50 taona i Lilie Lanonana goavana no hatao etsy amin’ny CC ESCA
Elaela no tsy nisy fampisehoana anaty efitrano raha resaka Hiran’ny Omaly sy ny atao hoe Kalon’ny Fahiny no resaka.
Oniversiten’Antananarivo Manamafy ny hetsika ny PAT, mandrahona ny mpianatra
“Efa nihaona tamin’ny tompon’andraikitra rehetra, ka dia miandry eto aloha izahay. Mbola tsy misy fandaharam-potoana mari-pototra aloha, voatery tsy maintsy hihemotra ny fidirana,…
Tsy fandriampahalemana 1781 maty vokatry ny halatr’omby nandritra ny 5 taona
Ny tambatra isa ankapobeny 1 781 ny olona namoy ny ainy vokatry ny halatra omby teto Madagasikara nandritra ny 5 taona (2016-2021). Nahatratra 43 tato anatin'ny dimy taona (2016-2021) ireo zandary namoy ny ainy am-perinasa.
Fanotorana tany eny Ampitatafika Miisa 25 ny alalana nomen-dRado Ramparaoelina
Maresaka ny fanotofana tany eny Ampitatafika Atsimondrano eny. Tsy miteraka olana anefa izany raha hahatsara zavatra raha araka ny fanadihadiana natao.